Zvakanakisa zvevhiki pa soydeMac | Ndinobva mac
Peter Rhodes | | apuro, Apple TV, Noticias, Mac makomputa
Rimwezve vhiki isu tinemi nekuunganidzwa kwezvinyorwa zvinonakidza uye zvakaonekwa muSoy de Mac.Pane maawa asara ekuti isu tipinde musangano wekutanga weWWDC 2015 uchaitwa mangwana uye watinotarisira Ziva izvo zvitsva mu OS X 11 uye iOS 9 anoshanda masystem.
Zvino, hazvisi izvo chete izvo zvinotarisirwa sezvo paine runyerekupe runonongedzera kuvandudzwa kweiyozvino Apple TV uye ndiani anoziva zvimwe. Pamwe Chimwe Chimwe Chinhu?
Isu tinotanga nechinyorwa icho chingangoita anecdotal uye icho ndechekuti mukadzi, padhuze nePalo Alto, iyo nzvimbo iyo yekutanga Apple komputa yakagadzirwa, mushure mekufa kwemurume wake akafunga kuchenesa garaji reimba yake achigadzirira mabhokisi matatu ejunk yemagetsi akatungamira kune yakachena poindi. Icho chokwadi ndechekuti mumwe wevashandi, mazuva mushure mekunge mukadzi asiya mabhokisi imomo, akavatarisa ndokuwana isina kugadzikana Apple I. Iye zvino varikutsvaga mukadzi kukupa iwe $ 100.000, hafu yemari yawakaita uchitengesa kumutengesi.
Rimwezve gore, avo veCupertino vakasarudza kuti tinogona tevera kutenderera kuripo paApple TV la Keynote Keynote WWDC 2015. Musangano wePasi rose WeVagadziri wakarongerwa kutepfenyura zviripo kuburikidza nekutepfenyura kwevhidhiyo neMuvhuro, Chikumi 8 na10: 00 pm nguva dzeSpanish. Pane chiteshi chaicho tinogona kuverenga "Unogona kuona chiitiko ichi chaipo pa10.00 (yemuno nguva) muna Chikumi 8".
Kuchinja nyaya yacho zvishoma, isu tinokuzivisa iwe nezve chii chitsva muTurnderbolt 3 nyowani. Iyo ine itsva infarct kumhanya uye naizvozvowo tinoziva kuti inopfuudzwa kune fomu yeUSB-C, iyo itsva standard iyo yatanga kukwira muMacBook ye12 inches. Ehezve, isu tanga tichizivawo izvozvi, iyo USB-C yeMacBook 12 haizorove kumhanya kweThunderbolt 3.
Tiri kusvika kumagumo ekubatanidzwa nechinyorwa matinokuratidza mifananidzo ye fekitori ine Apple muIreland. Zvinoshamisa kwazvo kuti Apple pinda pamusangano wako kune vezvenhau, asi zvinoita sekunge Tin Cook anoda kupa kubata kwekujeka kukambani ine zviito izvi.
Isu tinoramba tichirangarira nhau dzesvondo uye ndezvekuti kunyangwe zvidiki isu tese taitarisira kuti paWWDC 2015 batch rinotevera renyika dzaizotengeswa neApple Watch, zvinhu zvauya kumberi uye taziva kuti iyo June 26 ichatengeswa kuSpain. Ehe, Apple yakazivisa izvo zvemuenzaniso 42mm Nzvimbo Yakasviba isu tichafanirwa kumirira zvishoma.
Uye kupedza musangano uyu tinokukoka kuti uverenge zvakare chinyorwa patinofungidzira nezvacho izita ripi idzva rekushandisa yeMacs kutanga mangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Apple I mumarara, WWDC nhepfenyuro paApple TV, Thunderbolt 3 inoenda kune USB-C, fekitori yaApple muIreland uye zvimwe zvakawanda muZvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac.
Izita ripi iro Apple inogona kupa OS X 10.11?